Eden Hazard Oo Hoggaaminaya Tartanka Abaal-marinta Kubbad-Samaynta EPL Iyo Afar Laacib Oo Inqilaab La Doonaya - Cadalool.com
Eden Hazard Oo Hoggaaminaya Tartanka Abaal-marinta Kubbad-Samaynta EPL Iyo Afar Laacib Oo Inqilaab La Doonaya
February 20, 2019 Abdiwahab A. Abeye
Waxa meel xaasaasi ah maraya tartanka loogu jiro gool-caawinta horyaalka Premier League, kaas oo ciyaartoyga ugu sarreeya dhamaadka xili ciyaareed kasta la guddoonsiiyo abaal-marinta loo yaqaano Cadbury Premier League Playmaker.
Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara Chelsea ee Eden Hazard oo sameeyey toban kubbadood oo asxaabtiisu ay gool u beddeleen ayaa hoggaaminaya tartanka, waxaase ku xiga afar ciyaartoy oo kale oo min sagaal caawimood sameeyey, isla markaana daqiiqad kaliya kusoo qaban kara.
Hazard ayaa sare usoo kacay bishii December markii uu caawiyey laba gool oo Chelsea ay ku karbaashtay Manchester City, laakiin intii ka dambaysay hoos u dhac ayaa ku yimid qaab ciyaareedkiisii dhalinta iyo caawinta, waxaase sare usoo kacay Raheem Sterling iyo Leroy Sane oo Man City ah, kuwaas oo ka faa’iidyastay Kevin de Bruyne oo dhaawac ku maqnaa kulamo badan.
Xili ciyaareedkii hore, waxa abaalmarintan Cadbury Premier League Playmaker ku guuleystay Kevin de Bruyne oo sameeyey 16 caawimood, waxaase uu xili ciyaareedkan ka maqan yahay hirdanka kaalmaha sare.
Marka laga yimaaddo Hazard, waxa min sagaal gool sameeyey Christian Eriksen oo Tottenham ah, Ryan Fraser oo u ciyaara Bournemouth, Sane iyo Starling oo Man City ah.
Paul Pogba oo labadii bilood ee ugu dambeeyey ahaa xiddiga aanay cidina ku murmi karin ee Manchester United, ayaa siddeed caawimood sameeyey, waxaanu noqday khatarta ugu weyn ee Eden Hazard uu ka baqayo inuu booska kala wareego.
Rikoodhka caawinta ugu badan ee horyaalka Premier League ee hal-xili ciyaareed waxa haysta Thierry Henry oo 2002/03 sameeyey 20 kubbadood oo asxaabtiisu gool u beddeshay.
Liiska laacibiinta ku tartamaya gool-caawinta xili ciyaareedkan:
Hazard – Chelsea – 10
Eriksen – Tottenham – 9
Fraser – Bournemouth – 9
Sane – Man City – 9
Sterling – Man City – 9
Pogba – Man United – 8
Moutiinho – Wolves – 7
Salah – Liverpool – 7